I-ESP32-CAM: okufanele ukwazi ngale module | Izingxenyekazi zekhompyutha zamahhala
I-ESP32-CAM: okufanele ukwazi mayelana nale module
Sesishicilele mayelana ne- Imodyuli ye-WiFi ukuze I-Arduino ngesinye isikhathi, kepha kulokhu kumayelana nemodyuli I-ESP32-CAM, module ye-ESP32 WiFi enekhamera encane eyakhelwe ngaphakathi yevidiyo. Lokhu kuvumela imisebenzi emisha, efana nokugadwa noma izinhloli ezikude, ukuthwebula konke okwenzekayo lapho ungekho bese uyithumela kunoma iyiphi idivayisi yokuqopha noma ukwazi ukubona i-in-situ.
Cishe konke okushiwo kwimodyuli ye-WiFi esivele sikhulume ngayo, kuzosebenza kulokhu, kuphela ukuthi inezici ezithile ezincane ngaphezu kwe ikhamera ehlanganisiwe. Kepha konke odinga ukukwazi sizokukhombisa kulo mhlahlandlela ...
1 Yini i-ESP32-CAM?
1.1 Thenga eyodwa
1.2 Izici zobuchwepheshe ze-ESP32-CAM (i-datasheet)
2 Ukuhlanganiswa ne-Arduino IDE
El I-ESP32-CAM Yimodyuli ongayisebenzisa ngobuningi bamaphrojekthi, nange-Arduino. Yimodyuli ephelele ene-microcontroller ehlanganisiwe, engayenza isebenze ngokuzimela. Ngaphezu kokuxhuma kwe-WiFi + Bluetooth, le module inekhamera yevidiyo edidiyelwe, kanye ne-microSD slot yokugcina.
Le mojule ayibizi nhlobo, futhi kungenzeka ibe nayo ubuningi bezicelo. Kusuka ku-IoT elula, kuya kokunye okuthuthuke kakhulu kokuqapha isithombe nokuqashelwa kusetshenziswa i-AI, futhi nanjengohlelo lokuqapha ukubheka ukuthi kwenzekani endaweni ukude noma ngabe ukuphi ...
Imodyuli ye-ESP32-CAM ayibizi nakancane, njengoba ngishilo, ngama-euro ambalwa ongaba nayo. Futhi ungayithola kalula kwezinye izitolo ezikhethekile noma ku-Amazon. Isibonelo, nazi ezinye izincomo ngentengo enhle:
Amayunithi amabili we-ESP32-CAM ukufaka idivayisi yokubhekwa kwezinto eziningi.
I-ESP32-CAM ene-antenna I-8 dBi ibhendi ekabili nentambo yebanga elikhudlwana lokumbozwa.
Uma usuvele unayo imodyuli ye-ESP32 futhi ufuna ikhamera nje, unga ithenge ngokwehlukana.
Futhi uma ukhetha ukuthi kuphelele ngokuphelele ukusebenza ne-USB: ESP32-CAM + FTDI module.
Njengoba ukwazi ukubona, akubizi ...
Izici zobuchwepheshe ze-ESP32-CAM (i-datasheet)
Imodyuli ye-ESP32-CAM inenye izici zobuchwepheshe kuthakazelisa kakhulu ukuthi ungabona kufayela le- ishidi le-data umkhiqizi. Lapha ngifingqa okubaluleke kakhulu:
Conectividad: I-WiFi 802.11b / g / n + i-Bluetooth 4.2 ene-BLE. Isekela ukulayishwa kwesithombe nge-WiFi.
Ukuxhumana: UART, SPI, I2C, futhi I-PWM. Inezikhonkwane eziyi-9 ze-GPIO.
Imvamisa yewashi: kufika ku-160Mhz.
Amandla wekhompyutha we-Microcontroller: kufika kuma-DMIP angama-600.
Memoria: 520KB ye-SRAM + 4MB ye-PSRAM + ikhadi le-SD
Extras: inezindlela eziningi zokulala, i-firmware ibuyekezwa yi-OTA, nama-LED wokusebenzisa imemori ye-flash eyakhelwe ngaphakathi.
Ikhamela: Isekela amakhamera we-OV2640 angafika kuphakethe noma angathengwa ngokuzimela. Lezi zinhlobo zamakhamera zine:
2 MP enzwa yakho
Usayizi wamalungu afanayo angu-1622 × 1200 px UXGA
YUV422, YUV420, RGB565, RGB555 ifomethi yokukhipha kanye nokucindezelwa kwedatha eyi-8-bit.
Ungadlulisa isithombe phakathi kwe-15 ne-60 FPS.
El ukukhipha ye-ESP32-CAM ilula kakhulu, njengoba ubona kumdwebo odlule. Futhi ikhamera ixhunywe kusixhumi esivunyelwe yona. Ngemuva kwalokho, ngesibonelo se-Arduino, uzoqonda kangcono ukuthi ixhunywe kanjani nokuthi ngayinye yenzelwe ini, yize ungawuthola umbono.
Ngendlela, yize ingaveli emfanekisweni, futhi kaningi iba nesixhumi esiyindilinga ku-PCB esetshenziselwa ukuxhuma izintambo zangaphandle ze-antenna kwezinye izimo. Imvamisa iseduze kwensimbi yensimbi yesokhethi le-SD.
Ungasebenzisa a I-adaptha yangaphandle ye-FTDI ukuxhuma le module futhi wenze kube lula kuwe ukuyilawula. Lokhu kuvumela ukusetshenziswa kwethebhu yohlobo lwe-miniUSB esikhundleni sentambo ye-ESP32-CAM. Ukuze usebenzise eyodwa yalawa ma-module, ungawaxhuma kanjena:
Lungiselela imojuli ye-FTDI ukuze isebenze ku-3.3v.
IJumper iphini le-GPIO 0 ne-GND yemodyuli ye-ESP32-CAM.
Iphini engu-3v3 yemodyuli kumele ixhunywe ku-Vcc ye-FTDI.
I-GPIO 3 (UOR) yemodyuli izoya ku-TX ye-FTDI.
I-GPIO 1 (U0T) yemodyuli iya ku-RX ye-FTDI.
Futhi enye i-GND ye-ESP32-CAM ene-GND yemodyuli ye-FTDI.
Manje unayo eyodwa Uhlobo lwe-USB interface, engenza lula ukuxhumana kwephrojekthi yakho ...
Ukuhlanganiswa ne-Arduino IDE
Ukuze ukwazi hlanganisa ne-FTDI, ukuxhumana kulula kakhulu. Kufanele wenze lokhu okulandelayo:
Xhuma ukuxhumana kwe-5v kwemodyuli ye-ESP32-CAM ku-Vcc yemodyuli ye-FTDI.
Xhuma i-GND yemodyuli ye-ESP32-CAM ku-GND yemodyuli ye-FTDI.
I-TX0 evela ebhodini le-FTDI iya ku-GPIO 3 (U0RXD).
I-RXI evela ebhodini le-FTDI iya ku-GPIO 1 (U0TXD).
Futhi idlula i-GPI0 ne-GND yebhodi le-ESP32-CAM.
Manje usungayixhuma kwikhompyutha usebenzisa ikhebula le-USB ngokusebenzisa imodyuli ye-FTDI. Enye inketho ixhume ku-arduino ngqo, ngaphandle kokusebenzisa imodyuli ye-FTDI. Kepha ake sibheke icala nge-FTDI elingcono emacaleni amaningi ...
I-Los izinyathelo okufanele zilandelwe ukulungisa nokuhlela yonke into ukuthi isebenze:
Ukuze ulayishe ikhodi ebhodini, kufanele xhuma i-USB ku-PC yakho.
Isinyathelo esilandelayo ukufaka ifayela le- Umtapo wolwazi we-ESP32 ukwazi ukusizakala ngalokhu. Ngalokho, kusuka ku-Arduino IDE iya kufayela> Okuncamelayo> Lapho, enkambeni ukufaka i-URL, engeza: https://dl.espressif.com/dl/package_esp32_index.json bese uchofoza OK. Manje iya kumathuluzi> Amabhodi> Umphathi weBhodi> funa i-ESP32 bese ucindezela ukufaka u- "ESP32 ngu-Espressif Systems".
Bese uvule I-Arduino IDE > Amathuluzi> Amabhodi> khetha i-AI-Thinker ESP32-CAM (kuzomele ufake i-addon ye-ESP32 ukuze le nketho ivele kwimenyu). Bese uye kumathuluzi> Imbobo bese ukhetha i-COM, lapho ibhodi yakho ixhunywe khona.
Manje usungakwazi layisha umdwebo ebhodini, ukuyigcina ilula, sebenzisa esinye sezibonelo bheka Ifayela> Isibonelo> ESP32> Ikhamera> IkhameraWebServer. Uma usuqedile, lapho umyalezo wokuthi ulayishwe ngempumelelo uvela, susa ikhebuli kuphini le-GPIO 0 ye-GND bese ucindezela inkinobho yokusetha kabusha ebhodini.
Ekugcineni, ungasebenzisa futhi uqale bona imiphumela kusixhumi esibonakalayo sewebhu ... Uma uyiqhuba, izokunikeza kwi-qapha i-URL ene-IP okufanele uyifake kusiphequluli sakho sewebhu ukufinyelela. Ukusuka kuwo ungalungisa imingcele futhi ubone ukuthi yini ebonwa kwinzwa yekhamera.
Ngokusobala, ungakwazi yenza okuningi sisebenzise amandla we-WiFi ne-Bluetooth yale module. Khumbula ukuthi umkhawulo umcabango wakho. Lapha ngimane ngikubonise isingeniso esilula ...
Imininingwane engaphezulu - Inkambo yamahhala ye-Arduino
Indlela ephelele ye-athikili: Izingxenyekazi zekhompyutha zamahhala » Izingxenye ze-elekthronikhi » I-ESP32-CAM: okufanele ukwazi mayelana nale module
Konke kuchazwe kahle, futhi uhlelo lulayisha kahle, kodwa uma ngimisa kabusha i-ESP32 ukuze ngithole i-Wi-Fi kusiqapha se-serial, ngihlala ngithola iphutha elifanayo lekhamera:
Ikhamera ye-E (873): Uphenyo lwekhamera lwehlulekile ngephutha 0x105 (ESP_ERR_NOT_FOUND)
I-init yekhamera yehlulekile ngephutha 0x105
Kungenzeka kakhulu kungenxa yesixhumi semojuli yekhamera noma ukunikezwa kwamandla okungafanele.
Zama ukuqinisekisa lezo zinto ezimbili.
I-BeagleV: i-SBC entsha engabizi yentuthuko futhi isuselwa ku-RISC-V
I-Electroscope: ungayenza kanjani into yokuzenzela kanye nezicelo